क्यानरी टापुहरूमा P3Dv4.2
प्रश्न क्यानरी टापुहरूमा P3Dv4.2
1 वर्ष3महिना पहिले #1028 by सीट 7A
म फोटो दृश्यहरू P3Dv4.2 मा काम गर्न सक्दिन। मैले स्वचालित स्थापना गरें। के कुनै पनि यहाँ थाहा छ यदि यो संस्करण 4.2 मा काम गर्नेछ। यदि म दृश्य दृश्यहरू असक्षम गर्दछ भने थरी दृश्यमा कुनै फरक छैन र पूर्वनिर्धारित P3D दृश्यहरू प्रयोग गर्दछन्।
1 वर्ष3महिना पहिले #1029 by rikoooo
के दृश्य P3D v4 को दृश्यरी पुस्तकालय मा देखाउने छ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
1 वर्ष3महिना पहिले - 1 वर्ष3महिना पहिले #1032 by DRCW
यदि बदतर बदलिन्छ भने। म्यानुअल स्थापना गर्नुहोस्। कागजातहरू मार्फत फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई नाम दिनुहोस् " क्यानरी टापु "तपाईँको डेस्कटपमा फोल्डर राख्नुहोस्। म्यानुअल स्थापना चयन गर्नुहोस् र तपाईँले डाउनलोड स्थानको रूपमा सिर्जना गर्नुभएको फोल्डर चयन गर्नुहोस्। फोल्डर लोड भएपछि एक पटक, प्रतिलिपि गर्नुहोस् र त्यस फोल्डरमा राख्नुहोस्। P3D v4 एड-अनहरू तपाईंको कागजात फोल्डरमा अवस्थित फोल्डर। P3D V4 कार्यक्रम सुरू गर्नुहोस्। थिच्नुहोस् alt मेनु पट्टी ल्याउन कुञ्जी। चयन गर्नुहोस् विश्व / दृष्य पुस्तकालय / अनि तेस्पछि क्षेत्र थप्नुहोस्..., अब कागजातहरूमा स्थित फोल्डर चयन गर्नुहोस् ... त्यसपछि सक्रिय गर्नुहोस्। यो दृश्यहरू सक्रिय गर्नुपर्छ। लुकहेडमा मानिसहरूले राखे P3D v4 एड-अनहरू तपाईंको कागजात फोल्डरमा फोल्डरले तपाईलाई कार्यक्रम पुन: लोड गर्नु पर्छ ... तपाईका सबै दृश्यहरू एड-अनहरू अझै पनि त्यहाँ हुनेछ। त्यस तरिकामा तपाईंले आफ्नो सबै दृश्यहरू खरिदबाट पुन: लोड गर्नुपर्दैन। तपाईंले गर्नु पर्छ सबै फाइलहरू पुन: सक्रिय पार्दछ।
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष3महिना पहिले DRCW.
1 वर्ष2महिना पहिले #1044 by wozee
त्यहाँ त्यहाँ। मैले P3dV4.2 मा एउटा मैन्युअल स्थापना गरें र यो राम्रो तरिकाले जान्छ ... धेरै राम्रो देखिन्छ
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.304 सेकेन्ड